Liverpool Oo Ka Faa’iidaysan Weyday Fursadii Manchester United Ee Anfield | Himilo Media Group
Walow ay si weyn uga gacan saraysay kooxda ka soo horjeeday ee Manchester United, haddana Liverpool iyo tabobareheeda Klopp waxay u ahayd maalin kale oo jah-wareer, iyagoo ku sugnaa garoonkooda Anfield ciyaarttan ay fursadaha badan iska khasaariyeen ee barbar dhaca ku dhamaatay, waxaanay imika u noqonaysaa inay ciyaar kaliya guuleysteen siddeedii ciyaarood ee u dambeeyey.
Kooxda dhar casta ah ayaa ahayd kooxda gacanta sare ee ciyaarta lahayd, waxaanay dhego barjeeyeen goolwadaha United oo ay ku ganneen 19 kubadood, laakiin bandhig cajiib ah iyo iska cabin xoogan oo ay kala kulmeen shabaq ilaaliye David de Gea iyo dhamaystir la’aan ayaa sababtay inay wax natiijo ahi ka dhallan weydo dedaalkaas.
Darbadii ugu khatarsanayd iyo dhacdadii ugu weynayd ee aynu ka soo qaadan karo weeraradii aan kala go’a lahayn ee Liverpool, waxay ahayd kubaddii uu De Gea ka bed-baadiyey Joel Matip qaybtii hore ee ciyaarta, kaas oo afka goolka kubad soo booday ka helay balse goolwaduhu lugtiisa bidix ku soo celiyey, ka hor intii aanu Mohamed Salah ka soo boodadii dambe cirka u dirin.
United ayaa ka liidatay afka hore in kastoo ay dhawr jeer kubaddo aan sidaas u khatar badnayd ku qaaday difaaca Liverpool, waxaana ugu cuslayd kubadii Simon Mignolet sida caqli badnaantu ka muuqatay ugaga guntaday Romelu Lukaku.
Liverpool waxay ka sii darnayd qaybtii dambe ee kulanka, oo ay sii laban laabtay gacan ku haynta iyo halis badnaanta ciyaarta, waxaase fursadii ugu qaalisanayd ka khasaariyey Emre Can – markii uu masaafo sideed yard u jirta goolka, kaga ganay kubad uu isla qaloociyey, taas oo birta sare korka ka martay.
Dhibicda ay heleen ayaa ku filayd United, oo sagaal ciyaarood aan shabaqeeda kubad la taabsiin, 10 kii ciyaarood ee u dambeeyey.